ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမ ကို မီးရှို့မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေ ~ Myanmar Express
ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမ ကို မီးရှို့မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေ
တဖြည်းဖြည်း ကြီးသည်ထက် ကြီးလာသော ၂၀၁၂ ကုလား - ဗမာ အဓိကရုဏ်း ရဲ့ နောက်ဆုံး သတင်းအရ ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမယ်လို့ သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျှက် ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မြိုရှိ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များ နေထိုင်ရာဒေသ များတွင် တီးတိုးတိုင်ပင် လူစု တာတွေ တွေ့မြင်နေရပြီး ရန်ကုန်လူထုကလည်း စိုးရိမ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ ဆူးလေး ဘုရားအနီးတဝိုက်တွင် လုံထိန်း အများအပြားချထားပြီး SB များလည်း ခြေရှုတ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။အယ်ကိုင်းဒါးရဲ့ သတိပေးစာလည်း ထွက်လာတဲ့ အပြင် ထိုင်းတောင်ပိုင်းက မွတ်ဆလင်များနှင့်လည်း ရန်ကုန်မြို့က မွတ်ဆလင်များက အဆက်အသွယ်ယူနေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှာလည်း မွတ်ဆလင် အများအပြား ဝင်ရောက်မှု ရှိနေပြီး ပစ္စည်းအများအပြားလည်း ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပါးဆိုးတန်း အလယ် ဘလောက် တွင် ပျံ့နေသော သတင်းများအရ "မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်ဆလင် ဗလီ တစ်ခု ပျက် ရင် ရွှေတိဂုံ ဘုရားကိုလည်း ဖျက်ပစ်မယ်" ဆိုတဲ့ သတင်းများ ပျံ့နေတယ်လို့ ဒေသခံ တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းကြောင့် ကုန်ဈေးတန်း မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာ ရွှေတိဂုံကို အလျှင်အမြန် သွားဖူးနေကြကြောင်း သိရပြီး ရန်ကုန်မြို့က ကုလား ဆိုင် အချို့လည်း ပိတ်ထားကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မှာလည်းလည်း မောင်းတောမှာ ဆန္ဒပြမှု သက်သက်မဟုတ်တဲ့ လူစုလူဝေးနဲ့ မြန်မာအဆောက်အအုံများကို ဖျက်ဆီးမှုတွေ လုပ်နေလို့ ရဲများနဲ့ လုံထိန်းများက မနိုင်မနင်းဖြစ်နေရပါတယ်။ ၁၉၈၈ မေ ၁၃ရက် နေ့တုန်းကလည်း မောင်တောမြို့ အနီး ကုလား (ခေါ်) အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များနေထိုင်ရာ ရွာတွေက ကုလားတွေနဲ့ မြို့ထဲက ကုလားတွေ ပေါင်း အင်းအား ငါးသောင်းလောက်နဲ့ မြို့ကို စီးဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ (၄) ရပ်ကွက်က ဘုန်းကြီးကျောင်း အဖျက်ခံရတယ်။ ရခိုင် ရပ်ကွက်တွေကို ၀ိုင်းပြီး မီးရှို့ဖို့ သတ်ဖို့ လုပ်တယ်။ ရဲစခန်းနဲ့ ဘူးသီးတောင်- မောင်တောလမ်းမှာ ရှိတဲ့ လုံထိန်းတပ်က အတင်း ၀င်ပစ်ပြီး ကာကွယ်လို့ မြို့မကျ ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ မဟုတ်ရင် မောင်တောက ရခိုင်တွေဟာ ၄၂ ခုနှစ် တုံးကလို အပြတ်ရှင်း ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အဖြစ်အပျက်ကို မောင်တော ဒေသခံ ရခိုင်တွေကို မေးရင် သိနိုင်ပါတယ်။ မေ ၁၃ ဟာ ၄၂ ခုနှစ် ကုလား - ရခိုင် အဓိကရုဏ်း စဖြစ်တဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။Myanmar Express
8 June 2012 18:54
အို..မြန်မာ...ထလော့..ထလော့..မြန်မာပြည်ကြီးအား ကုလားရန်မှ ကာကွယ်ကြလော့...
8 June 2012 20:32
အ လာ ဟ် မ အေ လိုး။ လီး ဘဲ။ ရွှေ တိ ဂုံ ဘု ရား ထဲ ကို ချေ ရာ တစ် ခု ချ ကြည့်။ မ အေး လိုး မူ ဆ လင် တွေ။ မြန် မာ နိုင် ငံ တစ် ၀န်း လုံး က ခွေး တွေ၊ ခွေး အ ဆောက် အ အုံ တွေ အ ကုန် အ စ အ န ပျောက် သွား မယ်။ မင်း တို့ ကို မ သတ် ရ ရင် ကိုယ့် ကို ကိုယ် ဓါတ် ဆီ လောင်း မီး ရှို့ ပြစ် မယ် ကွ။ မြန် မာ ကွ။ မြန် မာ ကွ။
We can integrate any religion except Islam. There is no place for muslim in myanmar. Fight for your country! Fight for our nationality!
8 June 2012 22:51
8 June 2012 23:34
to protect my land.
9 June 2012 06:48
ဘုရားကိုဖြိုဖျက်တောင် ကောင်တွေ သေဖို့သာပြင်ကျတော့ ဘာတဲ့ ရွှေတိဂုံ ကိုဖျက်မယ်တဲ့လား ? အရင်ဆုံးဆီဆွက်လာခဲ့ ကုလားစုပ်တွေ အာလုံးရိုက်သတ်မယ်
မြန်မာလ၀က ကောင်:လို့ တွေရခိုင် တောင် ကုလားပြည်မ ဖြစ်သွားတာ
9 June 2012 12:36
ရခိုင်ပြည်သူတို့၏ ဒုက္ခကို ကိုယ်ချင်းစာနားလည်၍ ၎င်းတို့နှင့်ထပ်တူ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်သည်မြန်မာတိုင်းရင်းသားများတွင် မွတ်ဆလင် မပါသောကြောင့် မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်သည်မွတ်ဆလင်တို့၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် အကျင့် ကို မကြိုက်သဖြင့် မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်သည်
9 June 2012 13:55
i agree with you.They just look $ & exchange $ with ID for kalar long ago.
9 June 2012 20:41
fuck all kalar & kalarma.
9 June 2012 21:38
မအေလိုးကလားတွေ ငါတို.မြေလည်း ခိုးလာသေးတယ် ငါတို.လူမျိုးလည်းစော်ကားတယ် မင်းတို.ကောင်တွေ ငါ.လီးနဲ.ကို မသေမချင်း ထိုးသတ်မယ်ကွ
10 June 2012 11:22
ခွေးမသား ကုလားမိစ္ဆာ တွေ ရွှေတိဂုံဘုရား က တစ်ခုခု ဖျက်ဆီးကြည်. ငါလည်း နီးရာ ကုလားကို သတ်ပြီမှတ် ပြီးမှ မင်းတို. ကုလားမိစ္ဆာ တွေကို အသက်ချင်းလဲပြီး သတ်မယ်။
10 June 2012 17:07
ရွှေတိဂုံဘုရားကိုထိရဲရင်ထိကြည့် ပါးစပ်ပြောနဲ့လျှောက်ပြောမနေနဲ့ ထိသမျှကုလားတွေကော ကုလားပြည်ကော ကူညီတဲ့သူတွေကော မြေလှန်ပစ်မယ် မြန်မာတဲ့ ဘာထင်နေလဲ စိတ်ပါ၇င်စမ်းကြည့်လိုက်
ကုလားရန်မှ ကာကွယ်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့များ မနိုင်နင်းလို့ တပ်မတော်က ထိန်းနေပါပြီ.စိုးရိမ်စရာမရှိပါ
12 June 2012 18:08
12 June 2012 22:47
U right !!
12 June 2012 23:40
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ထံမှကြားရတာ..သောကြာနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီမှာ စတင်လှုပ်ရှားကြပါလိမ့်မယ်။(ကူညီနေသောအဖွဲ့- Naing Group ဖြစ်ပါတယ်)
13 June 2012 12:32
တချို့ကုလားကုမဏီတွေမှာဆို မြန်မာတွေဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ပိတ်ပင်ကြတယ်။
14 June 2012 16:21
14 June 2012 22:29
pls convey this message to all for preventing from muslim 'danger.
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြပါစို့။ ထလော့ မြန်မာ၊ မြန်မာ ထလော့။ ရွှေတိဂုံထိလို့ငြိမ်ခံနေတယ် ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်သားတွေ သမိုင်းသိပ်ရိုင်းသွားမယ်နော်....
ဝါရှင်တန်မြို့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် နှင့် အင်တာဗျူး (အပြည့်အစုံ)
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ အခု ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း ကနေပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရုပ်မြင်သံကြားကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မယ့် သ...
[image: Photo: အရက်နှင့် ဘီယာချက်စက်ရုံ ခွင့်ပြုပေးသူများ သမိုင်းတွင် တရားခံဖြစ်မည် အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင...
မိ မိ ၏ မွေး ကင်း စ ကလေး အား အိမ်သာ ကျင်း ထဲ စွန့်ပစ်သူ ဖမ်းမိ
ဓာတ်ပုံ- မတ်လအတွင်းက တောင်ကြီးမြို. ရူ့ခင်းသာပန်းခြံအတွင်းမှ မွေးကင်းစ အချင်းပါ မိန်းကလေးငယ် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ကန်ကြီးထောင့် မြို့နယ် ဘုရားကုန်း (၁)ရပ်က...
[image: Photo: Laptop ကို ကျန်းမာရေးညီညွတ်စွာ အသုံးပြုရန် နည်းလမ်း မေ ၂၀ ရက် ၂၀၁၃ Laptop အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးကို စာဖတ...
Sea Games ဖွင့်ပွဲ ပိတ်ပွဲတွင် ပါဝင်ဖျော်ဖြေရန် တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အကများ လေ့ကျင့် ဇာတ်တိုက်လျက်ရှိ
[image: Sea Games ဖွင့်ပွဲ ပိတ်ပွဲတွင် ပါဝင်ဖျော်ဖြေရန် တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အကများ လေ့ကျင့် ဇာတ်တိုက်လျက်ရှိ]
လွိုင်ကော် မေ ၁၉ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လာမည့် ဒီဇင...
ဆင်ချောင်တဲ့ ညောင်ကြပ်၊ ကြောင် ကျမှကြပ် (ပေးစာ-၁၅)
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည်၊ ပညာရေးအဆင့်အတန်းနိမ့်၍ အဆင့်မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရေးလုပ်ငန်းများ ကို နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေအမြောက်အများ အကုန်အကျခံ၍ ဘက်ပေါင်းစုံမှ အရှ...
အရက်နှင့် ဘီယာချက်စက်ရုံ ခွင့်ပြုပေးသူများ သမိုင်းတွင် တရားခံဖြစ်မည်
အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သည် ပထမဆုံး အစည်း အဝေး ထိုင် သည့် နေ့တွင်ပင် ပြည်ပမှ ဘီယာချက် စက်ရုံ တစ်ရုံကိုြ...